‘सहिद’ अन्सारीले यसरी दिलाएका थिए इन्डियन मुजाहिद्दीनलाई नेपाली नागरिकता ! | Ratopati
‘सहिद’ अन्सारीले यसरी दिलाएका थिए इन्डियन मुजाहिद्दीनलाई नेपाली नागरिकता !
personराजेश भण्डारी exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ६, २०७५ chat_bubble_outline0
राजेश भण्डारी/एसके यादव
काठमाडौँ । सुनसरी भुटाहा–५ का खुर्सिद आलम अन्सारीलाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । तर, उनको हत्याबारे विभिन्न शंका–उपशंकाहरु कायम छन् । अन्सारीको आतङ्कवादी संगठनसँग साँठगाँठ भएकै कारणले हत्या भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
सन् २००८ मा भारतको दिल्ली, गोरखपुर, फैजावाद, लखनउ, बनारस, जयपुर, अहमदावादमा भएको शृङ्खलाबद्ध बम विष्फोटमा संलग्न आतंकवादीहरुसँगको कनेक्सनमा खुर्सिद जोडिएको पाइएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार खुर्सिदले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट दिलाएको नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर ती आतंकवादीहरु दिल्ली पुगेका थिए ।
लामो समय शिक्षकको आवरणमा आतंकवादीहरुलाई आफ्नै घरमा सेल्टर दिएको खुलेपछि भारतीय सुरक्षा निकायले खुर्सिदलाई सुपुर्दगी गर्न भारतिय दूतावासमार्फत नेपाल पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।
तर, सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका उनलाई सुपुर्दगी गरिएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी स्रोतका अनुसार भारतबाट आएका सादा पोशाकका प्रहरीले २०५३ सालमा उनलाई पटक–पटक पक्राउ गर्न खोजेका थिए । तर, उक्त प्रयास असफल भयो । बिहीबार भारतीय सुटरले सुनसरीमा गोली हानेर उनको हत्या गरेका छन् ।
खुर्सिदले सेल्टर दिएकामध्ये सहनवाज २०७१ सालमा भारतकाे कानपुरमा समातिएपछि उनकाे साथबाट नेपाली पासपाेर्ट फेला परेकाे थियाे । त्यसपछि भारतीय सुरक्षा निकायकाे अनुराेधमा नेपाल प्रहरीकाे विशेष ब्यूराेले यसबारे अनुसन्धान गरेकाे थियाे ।
उनीहरुलाई आफ्नो घरमा राखेको र नागकिरता बनाइ दिएको कुरा थप प्रमाणित त्यतिबेला भयाे जतिबेला २०७४ सालमा इण्डियन मुजाहिद्दीनका अब्दुल सुभान कुरैसी र आरिज खान काठमाडाैंमा पक्राउ परे ।
खुर्सीदको हत्या हुनुभन्दा चार दिन अगाडि सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरीले असोज १ गतेदेखि सीमा सुरक्षा कडा पार्ने निर्णय गरेको थियो । केही घटना हुने आशंकामा बैठक बसेर नै सीमा नाका कडा पार्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसका बावजुद पनि नाकाबाट आएका बन्दुकधारीहरुले खुर्सिदको हत्या गरी पुनः त्यही बाटोबाट फरार हुन सफल भएका छन् । भारतको घुर्नामा बजारमा २४ घण्टा एसएसबीको गस्ती हुन्छ तर घटनाको समयमा त्यो दिन कोही पनि नरहेको नेपाली सुरक्षा अधिकारी स्रोत बताउँछ ।